ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ရဲ့ ငွေသော်တာရောင်ခြည်ဇာတ်လမ်း
ပြင်သစ်မှာ အသက်အငယ်ဆုံးသမ္မတ ဖြစ်လာတော့မယ့် မက်ခ်ရွန်းရဲ့အချစ်ဇတ်ကြောင်း
3 May 2017 . 5:46 PM
အလျားအနံမရှိပေမယ့် အသွားအပြန်ရှိတဲ့အထဲမှာ မေတ္တာတရားပြီးရင် အချစ်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်လာရင် ရုပ်ရည်ဆိုတာ အရေပြားတစ်ထောက်စာ၊ ချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာ ပကာသနနဲ့ အသက်အရွယ်ဆိုတာ ကိန်းဂဏန်းသက်သက်ပဲ ရှိတော့တာပါ။ လကွယ်ည သန်းခေါင်ယံ မိုးမှောင်တွေကျနေတုန်း ကတ္တယာလမ်းပေါ်မှာ ကပ္ပလီကြီး ကျွဲနက်စီးနေတာကို နေကာမျက်မှန်နဲ့ကြည့်ရသလို တကယ့်ကိုအမှောင်ဖုံးပြီး အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် လူတွေက ဘာဆိုဘာမှ မမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ Amiens မြို့မှာရှိတဲ့ Jesuit High School မှာ သူမ စာသင်တဲ့အချိန်တွေမှာဆို စူးရဲတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ ခပ်ချောချောကောင်လေး။ အကြည့်ရဲတဲ့ကောင်လေးရဲ့မျက်ဝန်းတွေကြောင့် သူမ ရင်ဖိုခဲ့ရတယ်။ အို . . . ၁၅နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို သူမ ဘာဖြစ်လို့ယုံရဲမှာလဲ။ ဆရာမဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို မကျိုးမပဲ့အောင် အနိုင်နိုင်ထိန်းသိမ်းနေရတယ်။ ကောင်လေးရယ် . . . မင်းရဲ့အကြည့်ကြားမှာ ဆရာမနှလုံးသားတွေ အရည်ပျော်ကျတော့မယ်နော်။
ဆရာမအသက်က ၃၉နှစ်တောင်ရှိနေပြီ။ ၂၄နှစ်၈လဆိုတဲ့ အသက်ကွာဟမှုက နည်းတဲ့အချိန်တွေလား၊ ကောင်လေးရယ် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ စာကိုပဲ ကြိုးစားပါနော်။ ဆရာမမှာ ကာမပိုင်လင်ယောက်ျား ရှိနေတာ ကောင်လေး မသိဘူးလား။ အကြီးဆုံးသား လောရင့် (Laurence) တောင် မင်းထက် ၂နှစ်လောက်ကြီးပါသေးတယ်။ ကောင်လေးရယ် မမိုက်ချင်စမ်းပါနဲ့နော်။
ကောင်လေးဟာ ဆရာမကိုရအောင် ယူမယ်လို့ ကြုံးဝါးထားပါတယ်။ သူမ ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း ကောင်လေး စာကြိုးစားနေပါပြီ။ အထက်တန်းအောင်ပြီးတဲ့နောက် Paris Nanterre University မှာ အတွေးအခေါ်ပညာ (Philosophy) ကို လေ့လာတယ်။ Paris Institute of Political Studies မှာ ပြည်သူ့ရေးရာမဟာဘွဲ့ (Master’s of Public Affairs) ရရှိခဲ့သေးတယ်။ ၂ဝဝ၄ခုနှစ်မှာ National School of Administration ကနေ ဘွဲ့တွေတသီကြီးရရှိလာပါပြီ။ Inspectorate General of Finances -IGF မှာ ဘဏ္ဍာရေးမှူးအနေနဲ့ တာဝန်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာ Rothschild & Cie Banque ဘဏ်မှာ ဘဏ္ဍာရေးရင်းနှီးမြှပ်နှံသူ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာ စွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့အချစ်စိတ်ဟာ ၂ဝကျော်တဲ့အထိ အချိန်ကာလတွေ ရွေ့လျားပေမယ့် ပျောက်ပျက်မသွားဘဲ ကြီးထွားလို့သာ လာခဲ့ပါတယ်။
၂ဝဝ၆ခုနှစ် သူမ ယောက်ျားနဲ့ ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ ကောင်လေးဟာ သူမကို လက်ထပ်ယူလိုက်တယ်။ လက်ထပ်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့အသက်ဟာ ၂၉နှစ်သာရှိပေမယ့် သူမဟာ ၅၄နှစ်အရွယ်ကို ရောက်နေပါပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်ဝေဖန်မှုတွေကို ဂရုမထားဘဲ ကြိုးစားလာလိုက်တာ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာသာမက နိုင်ငံရေးအထိတောင် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားဘဝထဲကနေ နိုင်ငံရေးသမားကြီးဖြစ်တဲ့အထိ အမြဲတမ်းချစ်နေတဲ့ကောင်လေးဟာ တခြားလူမဟုတ်ပါဘူး။
ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတဖြစ်လာတဲ့ Emmanuel Macron ဖြစ်ပြီးတော့ ငွေသော်တာရောင်ခြည်ကတော့ Brigitte Trogneux ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် မေလ ၇ရက်နေ့မှာ Marine Le Pen ကိုအနိုင်ယူပြီး ပြင်သစ်ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံး သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ လက်ရှိအချိန်မှာ ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Mac ဟာ အသက် (၄ဝ) ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူBrigitte Trogneux ကတော့ (၆၅) နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ရတဲ့စုံတွဲတိုင်း ရိုးမြေကျပေါင်းရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပွငျသဈသမ်မတ Emmanuel Macron ရဲ့ ငှသေျောတာရောငျခွညျဇာတျလမျး
အလြားအနံမရှိပမေယျ့ အသှားအပွနျရှိတဲ့အထဲမှာ မတ်ေတာတရားပွီးရငျ အခဈြလညျး ရှိပါသေးတယျ။ လူတဈယောကျကို တကယျခဈြလာရငျ ရုပျရညျဆိုတာ အရပွေားတဈထောကျစာ၊ ခမျြးသာဆငျးရဲဆိုတာ ပကာသနနဲ့ အသကျအရှယျဆိုတာ ကိနျးဂဏနျးသကျသကျပဲ ရှိတော့တာပါ။ လကှယျည သနျးခေါငျယံ မိုးမှောငျတှကေနြတေုနျး ကတ်တယာလမျးပျေါမှာ ကပ်ပလီကွီး ကြှဲနကျစီးနတောကို နကောမကျြမှနျနဲ့ကွညျ့ရသလို တကယျ့ကိုအမှောငျဖုံးပွီး အခဈြနဲ့ပတျသကျလာရငျ လူတှကေ ဘာဆိုဘာမှ မမွငျနိုငျတော့ပါဘူး။
ပွငျသဈနိုငျငံ Amiens မွို့မှာရှိတဲ့ Jesuit High School မှာ သူမ စာသငျတဲ့အခြိနျတှမှောဆို စူးရဲတဲ့မကျြလုံးတှနေဲ့ ကွညျ့နတေဲ့ ခပျခြောခြောကောငျလေး။ အကွညျ့ရဲတဲ့ကောငျလေးရဲ့မကျြဝနျးတှကွေောငျ့ သူမ ရငျဖိုခဲ့ရတယျ။ အို . . . ၁၅နှဈအရှယျကောငျလေးတဈယောကျရဲ့ အခဈြကို သူမ ဘာဖွဈလို့ယုံရဲမှာလဲ။ ဆရာမဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို မကြိုးမပဲ့အောငျ အနိုငျနိုငျထိနျးသိမျးနရေတယျ။ ကောငျလေးရယျ . . . မငျးရဲ့အကွညျ့ကွားမှာ ဆရာမနှလုံးသားတှေ အရညျပြျောကတြော့မယျနျော။
ဆရာမအသကျက ၃၉နှဈတောငျရှိနပွေီ။ ၂၄နှဈ၈လဆိုတဲ့ အသကျကှာဟမှုက နညျးတဲ့အခြိနျတှလေား၊ ကောငျလေးရယျ ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာ စာကိုပဲ ကွိုးစားပါနျော။ ဆရာမမှာ ကာမပိုငျလငျယောကျြား ရှိနတော ကောငျလေး မသိဘူးလား။ အကွီးဆုံးသား လောရငျ့ (Laurence) တောငျ မငျးထကျ ၂နှဈလောကျကွီးပါသေးတယျ။ ကောငျလေးရယျ မမိုကျခငျြစမျးပါနဲ့နျော။
ကောငျလေးဟာ ဆရာမကိုရအောငျ ယူမယျလို့ ကွုံးဝါးထားပါတယျ။ သူမ ဖွဈစခေငျြတဲ့အတိုငျး ကောငျလေး စာကွိုးစားနပေါပွီ။ အထကျတနျးအောငျပွီးတဲ့နောကျ Paris Nanterre University မှာ အတှေးအချေါပညာ (Philosophy) ကို လလေ့ာတယျ။ Paris Institute of Political Studies မှာ ပွညျသူ့ရေးရာမဟာဘှဲ့ (Master’s of Public Affairs) ရရှိခဲ့သေးတယျ။ ၂ဝဝ၄ခုနှဈမှာ National School of Administration ကနေ ဘှဲ့တှတေသီကွီးရရှိလာပါပွီ။ Inspectorate General of Finances -IGF မှာ ဘဏ်ဍာရေးမှူးအနနေဲ့ တာဝနျယူပွီးတဲ့အခြိနျမှာ Rothschild & Cie Banque ဘဏျမှာ ဘဏ်ဍာရေးရငျးနှီးမွှပျနှံသူ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျဘဝမှာ စှဲလမျးခဲ့ရတဲ့အခဈြစိတျဟာ ၂ဝကြျောတဲ့အထိ အခြိနျကာလတှေ ရှလြေ့ားပမေယျ့ ပြောကျပကျြမသှားဘဲ ကွီးထှားလို့သာ လာခဲ့ပါတယျ။
၂ဝဝ၆ခုနှဈ သူမ ယောကျြားနဲ့ ကှာရှငျးပွီးတဲ့နောကျမှာ ကောငျလေးဟာ သူမကို လကျထပျယူလိုကျတယျ။ လကျထပျတဲ့အခြိနျမှာ သူ့ရဲ့အသကျဟာ ၂၉နှဈသာရှိပမေယျ့ သူမဟာ ၅၄နှဈအရှယျကို ရောကျနပေါပွီ။ ပတျဝနျးကငျြဝဖေနျမှုတှကေို ဂရုမထားဘဲ ကွိုးစားလာလိုကျတာ စီးပှားရေးနယျပယျမှာသာမက နိုငျငံရေးအထိတောငျ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ ကြောငျးသားဘဝထဲကနေ နိုငျငံရေးသမားကွီးဖွဈတဲ့အထိ အမွဲတမျးခဈြနတေဲ့ကောငျလေးဟာ တခွားလူမဟုတျပါဘူး။
ပွငျသဈနိုငျငံရဲ့ သမ်မတဖွဈလာတဲ့ Emmanuel Macron ဖွဈပွီးတော့ ငှသေျောတာရောငျခွညျကတော့ Brigitte Trogneux ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ၂ဝ၁၇ခုနှဈ မလေ ၇ရကျနမှေ့ာ Marine Le Pen ကိုအနိုငျယူပွီး ပွငျသဈရဲ့အသကျအငယျဆုံး သမ်မတဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ လကျရှိအခြိနျမှာ ပွငျသဈသမ်မတ Emmanuel Mac ဟာ အသကျ (၄ဝ) ရှိလာပွီဖွဈပွီး ဇနီးဖွဈသူBrigitte Trogneux ကတော့ (၆၅) နှဈရှိလာပွီဖွဈပါတယျ။ ခဈြရတဲ့စုံတှဲတိုငျး ရိုးမွကေပြေါငျးရပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။